Fabric Acoustic Panel ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - သတင်း - Suzhou Soundbetter Architectural Materials Co., Ltd.
Fabric Acoustic Panel ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
၏အကျိုးသက်ရောက်မှုFabric Acoustic Panel
Fabric Acoustic Panel များသည် အသံစုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းများကို လက်ရှိတွင်တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့ကို အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံသဘောတရားများဖြင့် သန့်စင်ပြီး စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။ ပျော့ပျောင်းသောအထည်များ၊ အသံစုပ်ယူနိုင်သော ချည်သားနှင့် ရေစိုခံအလူမီနီယံစတစ်ကာများသည် ခိုင်ခံ့သောအသံစုပ်ယူနိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရရှိပြီး အလှဆင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို လှပစေသည်။
1. အသံစုပ်ယူမှုနှင့် ဆူညံသံများကို လျှော့ချခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ထင်ရှားသည်။
အဓိကကတော့ ဘာကြောင့်လဲ။Fabric Acoustic Panelကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အရောင်းမြှင့်တင်ပြီး လူကြိုက်များလာတာကတော့ တခြားသော အသံစုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းအမျိုးအစားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့သည် ကွဲပြားသော ပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော အသံစုပ်ယူမှုနှင့် ဆူညံသံများကို လျှော့ချပေးသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ အမှန်ပင် ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ကုန်ကျစရိတ်အလွန်အကျွံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် မလိုအပ်ဘဲ စီးပွားရေးဖိအားကို မဖြစ်စေဘဲ အလှဆင်ခြင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဥ်တွင် ပြဿနာနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမဖြစ်စေဘဲ လွယ်ကူသော တည်ဆောက်မှုတွင် ကောင်းမွန်သော အသံစုပ်ယူမှုနှင့် ဆူညံသံများကို လျှော့ချပေးသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေပါသည်။
2. ဖုန်မှုန့် ညစ်ညမ်းမှု မရှိစေဘဲ အလွန်ကျန်းမာစေပါသည်။
Fabric Acoustic Panel ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် အလွန်ပြင်းထန်သော အသံစုပ်ယူမှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိနိုင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ၎င်းသည် လေထုပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပျက်စီးစေမည်မဟုတ်ပါ။ ဖုန်မှုန့်မရှိသောကြောင့် လေထုကို ညစ်ညမ်းစေမည်မဟုတ်သောကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံမှုကို အာမခံနိုင်ပါသည်။ အလှဆင်မှုမှာ လှပမှုအားကောင်းပြီး fireproof effect က အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ၎င်းသည် နေထိုင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘေးကင်းစေမည်မဟုတ်ပါ။ မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်များ၏ အသံစုပ်ယူမှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်၊ ၎င်းအား အလုံးစုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်း သေချာစေသည့် သီးခြားပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကာ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်သင့်သည်။
3. အရောင်ပုံစံများကို အခမဲ့ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ရွေးချယ်မှု
တည်ဆောက်မှုမပြုမီ၊ သင်သည် အမျိုးမျိုးသောအရောင်ပုံစံများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။Fabric Acoustic Panelပိုပြီး သာယာတယ်။ အရောင်မျိုးစုံ၊ ပုံစံများနှင့် စတိုင်လ်မျိုးစုံကို လူတိုင်းရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင် အလှဆင်မှုလိုအပ်ချက်အရ ၎င်းတို့ကို သင့်တင့်မျှတစွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အသံစုပ်ယူနိုင်သောအကန့်၏တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးနံရံကိုဖျက်စီးရန်မလိုအပ်ပါ။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် အထူးလွယ်ကူသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် ပုံမှန်ထုတ်လုပ်သူများမှ ထုတ်လုပ်သော အသံစုပ်စက်အကန့်ကို ရွေးချယ်ပါ။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်ပြီး စီမံကိန်းကို အချိန်တိုအတွင်း ပြီးစီးနိုင်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် အလွန်နည်းပါးပြီး အလုံးစုံ ကုန်ကျစရိတ် စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အလွန်မြင့်မားပါသည်။ အိမ်ရှိလူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်သည် အသံစုပ်ယူမှုနှင့် ရွေးချယ်မှုအတွက် အတော်လေးမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။Fabric Acoustic Panelကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။
လွန်ခဲ့သော:Polyester Fiber Acoustic Panel ၏ Flame Retardant Effect ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။